'बिग बोस'मा सलमानको तलब कति ?
‘बिग बोस’मा सलमानको तलब कति ?
एजेन्सी, ८ असोज । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले १० वर्ष देखि ‘बिग बोस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर अबदेखि उनले उक्त शो सञ्चालन गर्न नचाहेको बताइसकेका छन् । निर्माताको अनुरोध र १० सालदेखिको सहकार्यले गर्दा उनले आगामी सिसन सञ्चालन गर्नेमा कुनै शंका छैन ।
‘बिग बोस’बाट सलमानले कमाउने पैसाबारे समेत बेला-बेला चर्चा हुने गर्छ । पछिल्लो समय ‘बिग बोस’को १३ औ सिजनका लागि उनलाई ठूलो रकम अफर गरिएको चर्चा चलेको छ ।
यसअघि २६ एपिसोडका लागि उनलाई ४०३ करोडको अफर आएको समाचारले बताएका थिए । तर उक्त अफर गलत भएको कुरा पछिल्लो जानकारीले प्रस्ट पार्छ । पिंकविलाले आफ्नो समाचारमा स्रोतलाई उदृत गर्दै सलमानलाई अफर गरिएको रकमबारे विस्तृतमा बताएका छन् ।
पछिल्लो जानकारी अनुसार ‘बिग बोस’ सिजन-१३ १०५ दिन अर्थात् १५ हप्ता चल्ने छ । गत सालमा सलमानले हरेक हप्ता ११ करोड पारिश्रमिक लिएका थिए । अर्थात् गत उनले पूरा सिजनबाट १६५ करोड कमाएका थिए ।
यता’बिग बोस’ सिजन-१३ लाई भव्यरुपमा सुरु गरिने भएको छ । यही कारण सलमानले आफ्नो पारिश्रमिक समेत बढाएका छन् । यसपटकको सिजनमा उनलाई हरेक हप्ताको १३ करोड दिइने भएको छ । यसको अर्थ उनले उनले एक एपिसोड गरेबापत ६. ५ करोड पाउने छन् । अर्थात् सिजन-१३ सञ्चालन गर्नका लागि सलमानलाई झण्डै २०० करोड दिने तयारी गरिएको छ ।
सलमानले आफ्नो पारिश्रमिकबारे हालसम्म मुख खोलेका छैनन् । तर कार्यक्रम निर्माताले उनलाई ठूलो रकम दिन्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । यही कारणले उनी व्यस्त हुँदाहुँदै पनि ‘बिग बोस’ लगातार सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यसबाहेक, १३ औ सिजन निकै रोमाञ्चकक र धमाकेदार हुने छ । यस पटकको सिजनमा सेलिब्रिटीमात्रै सहभागी हुँदैछन् । टेलिभिजन र फिल्म जगतका केही हस्तीबारे चर्चा चल्न थालेको छ । यो सिजनमा देवोलिनी भट्टाचार्जी र सिद्धार्थ शुक्ला सहभागी हुने लगभग पक्का भइसकेको छ । भट्टाचार्जी र शुक्लाको प्रोमो भिडियो समेत रिलिज भइसकेको छ ।
‘यो फिल्म चार पाँच वर्ष अगाडि रिलिज गर्ने वातावरण थिएन’